Ama-Champagnes aphezulu aseFrance newayini eliqhakazile
Ama-Champagnes aseFrance namaVine aKhanya
by UKelby Carr
Ama-Champagnes amaFrench amahle kakhulu kuwo wonke amaBhajethi
Uma uhlela ukugubha ngezinye izinto, uyafuna ukukwenza ngesitayela. Ungathola i-crappy esitolo sokudla esiphundu iwayini, kepha kuphela izivunguvungu ezivela esifundeni saseFrance ezibizwa ngokuthi i-champagne. Kukhona nomzana omncane eFrance othiwa igama, ephikelela ukuthi, empeleni, waqamba iwayini elikhazimulayo amakhulu eminyaka edlule.
Nasi uhlu lwamaFulentshi ama-champagnes afanelekile kanye namawayini ahlekayo kuwo wonke amabhajethi. Uzobekwa wonke amaholide, u-Eva Wonyaka Omusha, ama-toasts omshado, imikhosi noma nje kumnandi.
U-Alfred Gratien Cuvee Paradis Brut NV Champagne
Mxhwele abangani bakho noma izivakashi ngebhodlela le-$ 100-plus ye-champagne enhle futhi ehloniphekile uma unayo indlela. I-British Airways isebenza ekilasini lokuqala. Ngokungafani nemikhiqizo eminingi ye-champagne emikhulu, le iwayini elikhazimulayo lenziwe ngezandla ngaphansi kweso elindile le-cellar generation generation master. Igcwele, eyenziwe kusuka kumagilebhisi kaChardonnay kanye nePinot Noir, futhi iveza ama-aromas ama-walnuts, uju nezithelo ezimhlophe. Ukuziqhenya!
I-Krug NV Grande Cuvee i-Brut Champagne
Le champagne eyinkimbinkimbi futhi ejabulisayo iyavutshwa kuphela kuma-cask encane. Yenziwe ngamagilebhisi amathathu ahlukene e-Champagne ahlanganiswe ukuqhuma kokuvutha. It has bouquet elimnandi kanye ne nutty, ukuqeda isiphuzo. Ithole isilinganiso sezingu-96 kusuka ku-Wine Spectator.
Amakholomu edolobheni laseLouedoc laseLimoux athi udale iwayini elikhanyayo iminyaka eyikhulu ngaphambi kokuthi kuthiwa "wasungulwa" e-Champagne. Leli yiwayini elifanayo elenziwe ema-foothills asePyrenees ngokuya emakhulwini amahlanu manje, ngakho-ke isimangalo sinokufaneleka. Abantu baseLimoux bathi uDord Perignon udlule ngalesi sifunda futhi weba iwayini, ebeka uphawu lwakhe njengelakhe. Thola okunye mayelana nalesi sici kuLimoux: Ikhaya lewayini eliQala eliQhelile , noma uhlele ibhodlela noma ngisho nalesimo salini lebhajethi-elinobuhle nelingenakuqhathaniswa.
I-Moet & Chandon NV i-White Star Champagne
Uma ufuna ikhwalithi ephakeme ne-champagne eyinkimbinkimbi ngaphandle kokuphula ibhange, yilokho. Ibhodlela iyinzuzo yangempela yokubaluleka kwayo. I-champagne ehlanzekile, eyomile futhi egcwele, ekhanyisa ama-tannins. Okunye okukhiqizwa kusuka ezinhlobonhlobo ezintathu zamagilebhisi, le champagne inikeza izinhlamvu zepeyari, i-peach kanye ne-nut. I-Moet & Chandon ikhiqiza kokubili i-Vintage / Grand Vintage ne-Non-Vintage / Brut Imperial. I-White Star ilebuli yilebuli engeyona i-vintage noma i-NV. Inguqulo ye-vintage i-Brut Imperial Vintage.
I-Champagne Leclerc Briant Cuvée Extra Brut NV
Awukwazi neze ukushaya ikhwalithi engxenyeni yentengo yale nsimu yeqiniso yesiFulentshi. I-Wine-Seercher inikeza amaphuzu angu-86 angaphezu kwamashumi ayisishiyagalolunye, kodwa ayikho emazingeni amanani amathathu ahlakaniphile. Ibhodlela elihle kakhulu elisebenza kahle ngezilwane zasolwandle noma-kangcono nakakhulu-nge-dessert ecebile yaseFrance njengesihlahla se-tart noma i-chocolate mousse. Iqukethe izinhlamvu ze-apula eluhlaza, ibhotela kanye ne-hazelnut, futhi kuyinhlangano enkulu yokukhethwa kwamaholide.
I-Marquis de la Tour NV i-Brut iwayini elimnyama
I-Marquis de la Tour NV I-Brut iyinhlangano enhle kakhulu uma ufuna iwayini elingabizi elivuthayo. Ungavumeli ukuthi ithegi lentengo eshibhile ikukhohlise. Lesi sifunda saseLoire sibheka amawayini we-wine ngobuntu. Kuyinto iwayini elinamandla, elinamaqanda futhi elomile elinamanothi wesinkwa, izithelo nama-alimondi. I-Network Enthusiast Network yanikeze amaphuzu angu-86 futhi iyayibiza ngokuthi "ukuthenga okungcono kakhulu."
Izindawo zokuvakasha eziphezulu nezenzo okumelwe zenziwe ku-Amiens e-Picardie
Arles, France Ukuhamba Guide | Iprovence
Umhlahlandlela we-Glamorous Ski Resort of Courchevel 1850
Izikebhe Zokuhamba Zabantu
I-French National War Emathuneni e-Notre-Dame de Lorette
I-Pyrenees Mountain Range eFrance
I-Chi-Idolobha Elikhuphukayo: I-NYE YaseNtshonalanga Yonke Eyimangalisayo YaseChicago
Usuku lukaSte-Jean-Baptiste: Iminyaka Engaphezu Kwengu-2000 Yomlando
I-Venetian Photo Tour Tour
Buza Uchwepheshe: Philippe Gills
I-Fort Worth Gay Pride 2016 - I-Tarrant County Gay Pride 2016
Amadolobha ase-Amalfi Coast
I-South Granville Ukuthengwa - Ukuvakasha Kokuhamba KwaseNingizimu Granville
Amadolobha amahlanu adumile kakhulu e-Colombia
I-Eiffel Tower Amaqiniso namaPhuzu avelele kwabavakashi
Ubugebengu Nokuphepha eJamicaica
Ukuvakashela Emathuneni E-Arbor Hill
Okudingeka Ukwazi Ngokushayela E-Australia
Imisebenzi Ephezulu Engaphandle E-Oklahoma City
I-Polaroid Fotobar ku-The LINQ Las Vegas (Manje Isithombe & Iya)